निर्वाचन सम्पन्न भए पनि निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन..वर्तमान राजनितिक अन्यौलताका बारेमा संविधानविद डा.भीमार्जुन आचार्य – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना । १० पुष २०७४, सोमबार १८:३७
डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानविद
सरकारले राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र सरकारको नेतृत्व छोड्ने अडान लिएको छ भने वाम गठबन्धनले तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि दलहरूबीच एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विषयमा देखिएको विवाद बढ्दै गएको छ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दल भने विवादमा रुमलिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको गठन, नयाँ सरकार निर्माण र अहिले राजनीतिक दलको बीचमा देखिएको विवादको समाधान के हुन सक्छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसँग मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः
त्यो सम्भावना छैन। नेपालमा भन्ने कुरामात्र हो। नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैनन्। कम्युनिस्ट सच्चा समाजवादी कोही पनि छैनन्। सबै अवसरवादी र पुँजीवादी हुन्। त्यसैले जसको नामको सरकार बने पनि मुलुक अधिनायकवादमा जाने सम्भावना देखिँदैन। चिन्ता भनेको भद्रगोलको मात्र हो।
यसलाई यसरी गर्नुहोला मतदान,नमुना मतदानको पोष्टर सहित
यसरी गर्न सकिन्छ ५ नम्वर प्रदेशको राजधानी ब्यवस्थापन….